Ciidamada Jubbaland oo Gacanta ku dhigey Nin dil geystay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Ciidamada Jubbaland oo Gacanta ku dhigey Nin dil geystay
Ciidamada Jubbaland oo Gacanta ku dhigey Nin dil geystay
Ciidanka Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa howlgal ay ka sameeyeen Magaalada Kismaayo waxaa ay kusoo qabteen Nin habeen ka hor Magaalada Kismaayo dil ka geystay,kaddibna baxsaday.
Saraakiisha Ciidamada Nabadsugida Jubbaland ayaa waxaa ay sheegeen in Ninkaan uu Kismaayo ku dilay Askari lagu Magacaabi jiray Maxamed Yare,isla markaana uu ka qaatay qori uu watay,sidaasina Ciidamada Jubbaland ay kusoo qabteen 24 Saac kaddib markii uu falkaasi geystay.
Saraakiisha NISA ee Jubbaland ma shaacin waxaa uu yahay iyo cidda uu ka tirsan yahay Ninkaan dilay Askariga katirsanaa Ciidamada Jubbaland oo ay howlgalka ku qabteen.
Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa horay loogu dilay dad u badan Nabadoono,kuwaas oo qaarkood dilkooda ay sheegteen A-Shabaab,Isla markaana weli aan dad loo qaban.
Previous articleWaa sidee Caawa xaalada deegaanadii lagu dagaalamey ee Mudug?